♡ ♕ သတိ♕ ♡ အပျိုစစ်စစ်များအဆုံးထိဖတ်ရန်၊ Living Together Before Marriage | Burma Muslim
♡ ♕ သတိ♕ ♡ အပျိုစစ်စစ်များအဆုံးထိဖတ်ရန်၊ Living Together Before Marriage
By burmamuslim on January 27, 2014	အပျို စစ်စစ် များသာ ဖတ်ရန် ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး တမျိုး မထင်ပါနဲ့ နော် အအိုတွေဖတ်မိရင် စိတ်ဓါတ်ကျမှာစိုးလို့ ပါ အပျိုစစ်စစ်ဆိုတာက ခုခေတ်က ၁၆ နှစ်၁၇နှစ် ဆိုရင်ကို ရည်းစားက ရှိနေကြတာ ။ ရည်းစားဖြစ်တာ ၁ ရက်မကြားဘူး living together က နေနေကြပြီလေ တကယ်တော့ လက်မ ထပ် ရသေးပဲနဲ့ အတူတူနေကြတာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်အတွက် လုံးဝတန်ဖိုးကျသွားပါပြီ အပျိုစင် ဘဝဆိုတာ ယောင်္ကျားတိုင်းရဲ့တန်ဖိုး ထားခြင်း ကို ခံထားရသူလို့ တောင် တင်စားထားကြပါတယ် အပျိုစင်ကနေ အအို ဖြစ်ဖို့ က ၅မိနစ်မကြာပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အအိုကနေ အပျို ပြန်ဖြစ် ဖို့ က ရှိသမျှ စည်းစိမ်း ပုံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ဘဝအတွက်ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး ချစ်သူရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီအပျိုစင်ဘဝကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ချစ်သူကို နားလည်အောင် သူသဘောပေါက်အောင် ပြောပြထားပါ။ ဒါမှ သူဘက်က လက်မခံဘူး ။စိတ်ခုသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ရဲရဲကြီးသာ လမ်းခွဲ လိုက် ပါ။ သူ တကယ်ချစ်တာမဟုတ်တာသေချာနေပါပြီ။သေလောက်အောင်ချစ်နေပါစေ အပျိုစင် ဘဝကိုထိန်း သိမ်း ထားပါ။ ဘဝမှာ ရည်းစားဦး နဲ့လွဲ ကျ တာ ၁၀၀မှာ ၉၀ အထိ ရှိထား တာပါ။ ရည်းစားဦးကတည်းက အပျိုစင်ဘဝကို ပေးထားခဲ့လို့ ။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သူနဲ့ များ လွဲသွားခဲ့ ရင် နောင်တွင် ကိုယ်နဲ့ တကယ်လက် တွဲရ မယ့် ယောင်္ကျားနဲ့ တွေ့ မှာ အကြီးကြီးနောင်တရပါလိမ့်မယ် ။
အဲကျမှတော့ နောင်တရ ပါတယ်လို့ သိသွား လည်းနောက်ကျသွားပါပြီ။အခန့် မသင့်ရင် အိမ်ထောင်ရေပြသာနာတွေတောသ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ် မှာ အိမ်ထာင် ကျပြီးလို့ ကလေးတောင် ၃ယောက် ရပြီးမှ အပျိုဘဝတုန်းက ရည်းစားဟောင်း နဲ့ အတူတူနေ ခဲ့တဲ့ video ဖိုင်တွေ laptop ကနေတဆင့်ပြန့် ပြီး အိမ်ထောင်ရေး ကွဲသွားခဲ့တာ တကယ်လက်တွေ့ ပါ။ အတုမယူသင့် တာတော့ အတုမယူပါနဲ့ ညီမတို့ ။ (နောက် တစ်တစ်ခု အွန် လိုင်းမှာ status တင်ရင် လည်း စောက် ဘာဖြစ် စောက်ညာဖြစ်တယ် ။ အဲလို စောက်တွေ ထည့်ထည့်ပြီး ရိုင်းတာတွေ မတင် ကျဖို့လည်း တောင်း ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ဟာကိုယ် ဘာထင်နေ လဲတော့မသိပါ။ အများအမြင်မှာ အရမ်းရိုင်းတဲ့မိန်းမဆိုတာတော့ လူတိုင်းအထင်သေး သွားတတ်ကြ ပါ တယ်။ ) မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာ လှတာ ချမ်းသာ တာ ကို ပြောတာ မဟူတ်ပါဘူး ။ အပျိုစင် ဘဝကိုပြောထားတာပါ ။ သေလောက်အောင် လှနေပါစေ လက်မ ထပ်သေး ပဲ အအိုဖြစ်သွားရင် မိန်းမ တန် ဖိုး က ကျသွားပြီ ဆိုတာ သတိရှိကြပါ ညီမငယ်တို့living together ( လက်မထပ်သေး ပဲ အတူတူနေခြင်း) ဘဝမှာ ဆင်ချင်နိုင်ကြ ပါစေ ။ လို့ ဆုတောင်းပေးရင် ခင်မင်လျက် Online Chitthu
Living Together Before Marriage It’s no secret that many couples are cohabiting, that is, living together inasexual relationship without marriage. Currently, 60% of all marriages are preceded by cohabitation, but fewer than half of cohabiting unions end in marriage.
Many couples believe – mistakenly – that cohabitation will lower their risk of divorce. This is an understandable misconception, since many people are the children of divorce, or have other family members or friends who have divorced. Other reasons for living together include convenience, financial savings, companionship and security, andadesire to move out of their parent’s house.
In Defense of Marriage http://www.youtube.com/watch?v=Lh_81zsW6U8